Toga Sarajevo | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Ihe ị ga-ahụ, Sarajevo
Sarajevo bụ isi obodo Bosnia na Herzegovina, obodo nwere otutu ahihia, nke di na ndagwurugwu gbara ugwu. Ọ bụ ite na-agbaze n'okpukpe, ndị Katọlik, ndị Juu, ndị Ọtọdọks na ndị Alakụba ibikọ ọnụ, nke mere na a sụgharịrị ibikọ ọnụ na omenala ha.
Kedu ihe anyị nwere ike ime na Sarajevo? Anyị chọpụtara taa.
2 Sarajevo njem nleta
Ọ bụrụ na ị gafeela afọ 40 ị nwere ike icheta afọ ọgbaghara ndị ahụ mbubreyo narị afọ nke XNUMX, mgbe ọchịchị Kọmunist nyere ọnwụ ọnwụ ikpeazụ ya ma degharịa map ụwa nke Europe. N'ime oge a, agha dara ọbara na Balkans wee Ehichapụrụ Yugoslavia, site n’agha, nke were afọ anọ bibie obodo ahụ.
N’afọ 1995, agha ahụ biri ma e kee obodo ahụ ụzọ abụọ: n’otu aka bụ Sarajevo nke anyị na-atụ aka na ya (ókèala nile a na-alụ tupu agha na Novi Grad tinyere mpaghara ndị ọzọ), bụrụ isi obodo nke mba ọhụrụ ahụ, ma n’akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Sarajevo, isi obodo nke Republic of Srpska. Ha abụọ na-esote ibe ha.
Site na 2003, e wughachiri ọtụtụ n'ime obodo ahụ, Mana agha ọgbụgba ọbara nke dị n'etiti ndị mmadụ nke "kọmunist" kemgbe ọtụtụ iri afọ hapụrụ ihe ọ bụla. Taa, isi obodo bụ, dị ka anyị kwuru, n’etiti ndagwurugwu, Dinaric Alps gbara ya gburugburu. E nwere isi ugwu ise gbara gburugburu ma nke kachasị elu dị ihe karịrị mita 2 elu. Igman, Jahorina, Trebevic na Bjelasnica ka a maara dị ka Sarajevo Olympia.
E nwekwara osimiri na-agafe obodo ahụ, Miljacka ma ọ bụ Osimiri Sarajevo. Ihu igwe dị na mpaghara ahụ bụ kọntinentKa ọ dị nso na Oké Osimiri Adriatic mara mma, ọnọdụ okpomọkụ adịghị ike.
Sarajevo njem nleta
Dị ka anyị kwuru, ọtụtụ okpukpe na-ebikọ ọnụ na Sarajevo ruo ọtụtụ narị afọ n'ihi ya, ọ bụ ọdịbendị dịgasị iche iche. Mgbe agha ahụ gachara, taa, ndị ka n'ọnụ ọgụgụ bụ ndị Bosnia, ee. Mgbe ahụ, Kedu ihe ga-amata na Sarajevo?
Anyị na-amalite site na etiti obodo nke ndị Ottom guzobere na narị afọ nke XNUMX. Oge ochie a ka na-ahụ n'ime Bascarsija, otu obere agbata obi nwere otu ụlọ ahịa nwere ụlọ akụkọ nwere ụlọ ahịa malite n'oge ahụ dị anya. Ahịa a na-esote osimiri Miljacka wee rute isi iyi osisi nke Sebilj, ya na square ya jupụtara na nduru.
Ọ bụ ahụkarị bazaa ya na uda nke ihe na-esi ísì ụtọ na-ese n'elu ikuku, anụ na atụrụ, ihe ncheta na nri ụtọ Turkish dị iche iche. Mpaghara a na-etinyekwa ọtụtụ ebe akụkọ ihe mere eme nke obodo ahụ, dị ka Alakụba Gazi-Husrev ya na ụlọ elu elekere nke ọnwa, ma ọ bụ ụlọ ahịa kọfị nke bụ ezigbo ebe iji nwaa obere kọfị Bosnian: siri ike, dị oke, dị ka ndị Bosnia si kwuo, okpukpu iri ka mma karịa kọfị kọfị Turkish.
Window ọzọ n'ime oge gara aga nke Sarajevo bụ ochie mgbidi lekwasị anya na mgbidi. E nwere mmadụ ise ha malitere ọrụ na 1729 mana ọ bụ naanị ndị Ebe ewusiri ike nke Amarillao Zuta Tabija, na Bijela Tabija. Site ebe a echiche ndị mara mma, ọkachasị mgbe chi jiri mgbe anwụ dara n’elu elu ụlọ na-acha uhie uhie na minarets ochie ma ọ bụ ihe owuwu Austro-Hungarian nke a na-ahụkarị na ngwụsị narị afọ nke iri na itoolu. Ebe a wusiri ike nwere obere cafe ma nwee tebụl picnic na ogige biya mara mma.
Ọ bụrụ na akụkọ ihe mere eme nke narị afọ nke iri abụọ masịrị gị ị nwere ike ịga Àkwà Mmiri Latin, na Osimiri Miljacka, nke jikọtara ebe ochie ochie na ógbè Skenderija. Ọ bụ akwa mmiri kacha ochie na Sarajevo, Narị afọ nke 1914. Ọ bụ ebe a na 18 onye Sers dị afọ XNUMX gburu onye nketa Habsburg, nke a họpụtara ka ọ bụrụ ocheeze, na-enye mmalite nke Agha Worldwa Mbụl.
Enwere obere ebe ngosi nka nke ahụ na-echeta ihe omume mechara kwụsị alaeze abụọ, Ottoman na Austro-Hungarian. Ka oge na-aga, ụlọ ihe ngosi nka agbanweela ma taa karịa ihe ọ bụla ọ na-elekwasị anya na afọ iri anọ nke Alaeze Austro-Hungaria na-achị obodo na otu esi kwụsị.
Ọ bụghị naanị ya akwa, e nwere ọtụtụ ndị na-akpali àkwà mmiri: na akwa mmiri na-agafe agafe n'ihu Academy of Fine Arts, el Kozija Cuprija Bridge, nke Suada na Olga Bridge, bl Uche Ogbuagu ...
Ọ bụ eziokwu na Sarajevo nwere ntakịrị oge ahụhụ, ya na ọtụtụ agha na mbibi, yabụ saịtị ọzọ metụtara nke a gara aga bụ Ọwara mita 800 ogologo jiri ndị ahịa iwu ịbanye na ịhapụ obodo n'oge agha nke 90s.
Taa enwere Tunlọ Ọrụ Tunnel War, nke nwere mpaghara echekwara nke ọma. Ihe ngosi ọzọ na-elekwasị anya na mgbukpọ kasị njọ na Europe kemgbe Oké Mgbukpọ ahụ, mere na 1995, otu ọnwa tupu agha ahụ ebi.
Yabụ, ndị agha Serbia gburu ụmụ nwanyị Alakụba Bosnia 8 n'otu obodo, ọkachasị ụmụ nwoke kamakwa ụmụ nwanyị na ụmụaka. E liri ha niile n'ili buru ibu. Enwere ihe ngosi nke foto na oji na oji. The War Ọwara Museum bụ na Tuneli Street, 1 na Ihe ngosi Srebrenica-Galerija na calle trg Fra Grge Martica, 2 / III.
Ọ bụrụ na ị bụ onye Juu, ị ga-ahụ ụzọ mbata obodo a gabigara n’obodo a n’ebe dị ka Ebe a na-edebe ndị Juu, ebe a na-eli ozu ochieio, otu n'ime ndị kasị ibu na Europe, na Osisi Novi Hram na Kenlọ Nzukọ Ashkenazi. Ka oge na-aga, mgbe ndị ọchịchị Austro-Hungaria bịarutere, e wuru ọtụtụ ụlọ nwere ọtụtụ ọmarịcha ọdịda anyanwụ nke ọma. Otu ihe atụ bụ Vijecnica, isi ụlọ ọrụ gọọmentị, n'ụdị aghụghọ-Moorish.
Nzukọ n'etiti ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ Enwere ike ịhụ ya n'akụkụ dị iche iche nke obodo ahụ, dịka ebe ebe ọmarịcha ọwụwa anyanwụ Saraci Street na-ezute ọdịda anyanwụ Ferhadija Street. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịmata mmekọrịta dị n'etiti Sarajevo na Olympics. Obodo ahụ nọrọ na Winter Olympics na 1984 ma ọtụtụ ụlọ ọrụ ya ka ewuru karịsịa maka mmemme ahụ.
Enwere Ihe ngosi nka Olympic na ihe owuwu ndị ọzọ (The Zetra Olympic Complex, the Holiday Inn Hotel), ma ọ dị mwute ikwu na e bibiri ndị ọzọ na Siege nke Sarajevo nke dị site na 1992 ruo 1996. can nwekwara ike ịchọta ebe Sarajevo Roses, akara ndị a hapụrụ site na ogbunigwe ma na-achị obodo niile, ma ọ bụ ihe ncheta maka ụmụaka ndị e gburu n'oge nnọchibido ahụ dị n'ime ogige Veliki.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ njem nleta ị nwere ike isonye Sarajevo Na-ejegharị Na-agagharịr nke na-ewe awa abụọ. Ya mere, cheta, na Sarajevo enwere okpukpe, akụkọ ntolite, ndụ abalị na-atọ ụtọ na ọmarịcha gastronomy multicultural.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Sarajevo » Na-aga Sarajevo